(DHAGEEYSO):-Barakac ka bilowday degamda Xarardheere ee gobolka Mudug. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
(DHAGEEYSO):-Barakac ka bilowday degamda Xarardheere ee gobolka Mudug.
By Reporter	 On Feb 16, 2017
Wararka naga soo gaaraya degmada xarardheerer ee gobolka mudug waxaa ay sheegayaan in dadku ay bilaabeen inay barakacaan kadib markii ay ku dhaawaadeen ciiddamada huwanta oo wada howlga ka dhan ah Al-shabab.
Dadka kunool xarar dheere ayaa muujinaya cabsi ah dagaal ka dhaca degmadaasi xili ciidamada dowaladda iyo kuwa galmudud ay kusii dhawaanayaan Xarardheere.
Wariyaha Dalsan ee Galakcyo Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye ayaa soo sheegaya in barakac xoogan uu ka bilawaday degmada xarardheere waxaana dadku ka foganayaan waxyeela kasoo gaarta dagal dhaxmara Al-shabaab iyo ciddamada Dowlada.
Degmada xarardheere ee gobolka mudug waxaa Sagaal-kii sano ee ugu danbeeyey gacanta ku hayey Al-shabaab waana magaalo ay ku xooganyihiin shabaab iyadoo ciiddamada dowladda, kuwagalmudug oo ay taageerayaan ciiddamo cadaan iyo diyaarado dagaal ay doonayaan inay shabaab ka saaraan degmadaas.
Halkaan Hoose ka Dhageeyso Wareysi Wariyaha Dalsan Galkacyo.
(SAWIRO): Madaxweyne Farmaajo oo degay Villa Somalia iyo Baaq Is-cafin ah oo uu jeediyey.
(DHAGEEYSO):- Ururka Suxufiyiinta Soomaaliland ee SOLJA oo Cambaareen u jeediyey weriye Coldoon.